Yakhela i-Canvas edibeneyo
Khetha i-Standard, Custom, okanye i-DIY Options
Uninzi lwabaculi bepeyinti kwinqwelo edibeneyo, kodwa xa usuqedile umzobo wakho uwubeka njani? Isakhelo esicwangcisiweyo senzelwe umsebenzi ophangaleleyo wobugcisa, kodwa kukho iindlela ezininzi zokwenza i-canvas elula.
Kulula kakhulu ukuseta iteksi elula. Akudingeki ukuba ususe umgca wecala kwizithuba zokukhawulela ukucwangcisa umzobo. Isakhelo sihlala kumda we-stretch we-stretch njengokuba bekuya kwibhodi ye-tovas, kwaye akukho mfuneko yokuyikhusela ngeglasi.
Ukuba i-stretch ye-stretch idibene, unokususa umzobo ogqityiweyo kwaye uyiguqule, mhlawumbi kwi-stretch entsha okanye ngenkxaso enzima.
Indlela Yokwenza Ipeyinti Yakho Yokwenziwa Kwe-Canvas Ecacisiweyo
Okokuqala, ufanele ukwazi ukulinganisa kwangaphandle komzobo wakho kunye nohlobo lwesakhelo oluya kubonakala luhle kuyo. Ubukhulu obuqhelekileyo bubona buninzi bezoqoqosho; Uya kufuneka uhlawule ngaphezulu xa uthengisa isakhelo sesiko. Ufuna isakhelo esiza kuzalisa umzobo wakho kwaye ungagqugquzeli nayo. Qinisekisa ukuthenga isakhelo esenzelwe ubuninzi bomzobo wakho ukuba ubukhulu obuqhelekileyo. Ukuba isakhelo asiyonto enzulu njengenqanawa, uza kubona inxalenye yecala lomgca ukuba ukhangele ukusuka kwicala.
Ukuze ulungise umgca, uvele ususe umzobo kwisakhelo ukusuka ngasemva njengesiqhelo. Ungakwazi ukufumana izicatshulwa zomgca okanye ucwecwe umtshini wokufakela isakhelo kwinqanawa evela kwi-hardware okanye kwisitoreji, okanye kwi-intanethi.
Umculi uBrian Rice usebenzisa i-pipe clamps, enokuthenga izicatshulwa ezikhutshiwe, ukukhusela isakhelo kwinqwelo. Misa nje izikhetshana ezingabonakaliyo kwisakhelo kwaye i-tovas yakho iya kukhuselwa ngaphakathi kwesi sakhiwo.
Akukho imfuneko, kodwa ngamanye amaxesha icwecwe lephepha ligcinwe ngasemva kwengubo eluhlaza usebenzisa iphepha elibomvu elifakwe kwisakhelo kunye ne-tape ehlangene nomgca ukuze 'ulungelele' emva komgca kwaye ubeke uthuli luqokelele kuyo.
Ukuba wenza oku, qiniseka ukuba usike umgodi emva ukuze uvumele i-tovas iphefumule ukuze iguqule utshintsho kwiqondo lokushisa kunye nomswakama.
Ungasebenzisa kwakhona ifreyimu ye-floater (ngezinye izihlandlo ekubhekiselwe kuyo njenge-L-ifreyimu) ukuyila umzobo wakho. Ngale ntlobo yeefowuni, kukho umda phakathi komgca wecala kunye nesakhelo esinjengokuthi umzobo ubonakala ujikeleza kwisakhelo. Umzobo ufakwa ukusuka phambili kwaye uhlala kwisiqalo sesakhelo apho umzobo uphahla khona emva kwee-stretcher bars. Ezi zifowuni ziyafumaneka ngobukhulu obuhlukahlukeneyo kunye nobunzulu, kubandakanywa ezifanelekileyo kwigalari ejulile -ukuguqula imiqolo .
Ukuba ungumntu wokwenene we-DIY, unokwakha isakhelo sakho. I-lattice engabizi kakhulu ubukhulu obufanelekileyo nobubanzi ukuqala. Sika i-lattice ukuya ubude obuchanekileyo ukwenza ifreyimu, upende njengokuba uyifunayo, kwaye usebenzise izikhonkwane zetambo okanye i-brads ukuze uzibophe iziqwenga ndawonye ngeenxa zonke zakho.
Iingcali zoMasters: Indlela yokuPenda njenge-Expressionist
I-Painter's Tips to Deal With Stuck Paint Tube Caps
Ndingayisebenzisa njani iGolide kwipayipi efana neKlimt?
Indlela yokusebenzisa ityuwa ukudala ii-snowflakes kwi-Watercolor
Ndingafumanaphi Iifom zeeNeferensi zePaintings?
Yenza i-Data Data Cell nge-Excel's IF Function
Thomas Aquinas College GPA, SAT kunye ne-ACT Data
Ukusebenzisa i-Hyphens ngesiSpanish
I-Teresa Palmer ixoxa ngeeDisemba zabafana